पति-पत्नीको उमेर कति वर्षले अन्तर हुनुपर्छ ? यो एक पल्ट हेर्नुहोस – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पति-पत्नीको उमेर कति वर्षले अन्तर हुनुपर्छ ? यो एक पल्ट हेर्नुहोस
त्यसैगरी जुन दम्पतीको उमेर अन्तर १२ बर्षभन्दा बढी छ, उनीहरुको स’म्बन्ध वि’च्छेद हुने संभावना अधिक रहन्छ । यसको निष्कर्ष के भने, दम्पतीबीच जति धेरै उमेर अन्तर हुन्छ उत्तिनै उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट आउने र स’म्बन्ध वि’च्छेद हुने संभावना बढी देखियो । तसर्थ सुखमय दाम्पत्य जीवनका लागि श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर अन्तर पनि कम हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्स निकाल्न सकिन्छ । एजेन्सी